रञ्जनहरि कोइराला बुधवार, असोज २५, २०७४ 6664 पटक पढिएको
काठमाडौं : पोइन्ट अफ सेल (पीओएस) अर्थात् स्वाइप मेसिनको प्रयोग पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। ठूलाठूला मल, होटल, एयरलाइन्स, ट्रेकिङ कम्पनीको विस्तारसँगै यस्तो मेसिनको प्रयोग ठूलो मात्रामा वृद्धि भएको छ। काठमाडौंलगायत बाहिरी सहरमा बनेका ठूला मल तथा होटलले यस्ता स्वाइप मेसिनलाई प्रयोगमा ल्याएको देखिन्छ।
विशेषगरी पीओएस मेसिनको प्रयोग पर्यटकलक्षित व्यवसायले गरेका छन्। बाहिरबाट आउने पर्यटकले बढी मात्रामा यस्तो कार्डको प्रयोग गर्ने भएकाले पर्यटकलक्षित व्यवसायमा यस्ता मेसिन प्रयोगमा आएका हुन्। कार्ड घोटेको भरमा कुनै पनि सेवा तथा सामग्रीको लागत तिर्न सकिने भएकाले पनि यस्ता किसिमका प्रविधिको प्रयोग दैनिक रूपमा बढ्दै गएको हो। नेपालमा पीओएस सिस्टमको प्रयोग नै पर्यटकलाई लक्ष्य गरेर सुरु भएको अल्पाइन कार्ड सर्भिस प्रालिका महाप्रबन्धकमा राजगोपाल राजभण्डारीको भनाइ छ। उनका अनुसार सुरुमा यसलाई नेपालका केही पाँचतारे होटलले प्रयोगमा ल्याएका थिए।
३० वर्षअघि नेपालमा यसको प्रयोग सुरु भएको राजभण्डारी बताउँछन्। नेपालमा सुरुमा नेपाल ग्रिनलेज बैंक (अहिलेको नेपाल स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक)ले पीओएस मेसिन भित्र्याएको मेगा बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा बैंकर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले जानकारी दिए। यहाँ रहेका पाँचतारे होटलको अनुरोधमा यो सेवा भित्रिएको उनको भनाइ छ। पछि अल्पाइन कार्ड सर्भिसले यो सेवा दिन थाल्यो। अल्पाइनले पहिलो चरणमा युनियन बैंक अफ सिंगापुरसँग सहकार्य गरेर पीओएस सिस्टमलाई नेपालमा भित्र्याएको थियो।
पछि नेपाल स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले कार्ड दिन सुरु गरेपछि अल्पाइनले नेपाल स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकसँग सहकार्य गर्‍यो। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पनि उक्त सेवा बन्द गरेपछि अहिले अल्पाइनले हिमालयन बैंकसँग सहकार्य गरेर कार्डको भुक्तानी गर्ने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। अल्पाइन कार्ड सभिर्सका रूपमा काम गर्ने पहिलो नेपाली कम्पनी पनि हो।
अहिले नेपालमा रहेका २८ वटा कमर्सियल बैंकले कार्ड सर्भिस दिन थालेको बंगलादेश बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा बैंकर एसोसिएसनका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए। ‘बैंकले यस्तो सेवा दिनु आवश्यक पनि थियो', उनले भने। पछिल्लो समय नेपालमा पर्यटकको बढ्दो आकर्षण र मल तथा होटलमा पीओएस सिस्टम राख्ने बढ्दो क्रमले पनि बैंकलाई डेभिट÷क्रेडिट कार्ड रिलिज गर्न जरुरी भएको हो।
पर्यटकले बढी मात्रामा यस्तो कार्डको प्रयोग गर्ने भएकाले पर्यटकलक्षित व्यवसायमा यस्ता मेसिन प्रयोगमा आएका हुन्।
अहिले नेपालमा ट्राभल कार्ड, डेभिट÷क्रेडिट कार्ड प्रयोगमा छन्। त्यसमा भिसा, एससीटी, मास्टर, जेसीबी, सीपीयू, अमेरिकन एक्सप्रेस, मेस्ट्रोलगायत कार्ड प्रयोगमा छन्। डिस्कोभर र डाइनस कार्ड पनि नेपालमा अल्पाइनले ल्याउने तयारी गरिरहेको राजभण्डारी बताउँछन्। उनका अनुसार नेपाली बैंकले विशेषगरी मास्टर कार्ड, एससीटी र भिसा कार्डको सेवा मात्र दिएका छन्। तर अल्पाइनले हिमालयन बैंकसँग सहकार्य गरेकाले नेपालमा अहिलेसम्म भित्रिएका सबै कार्डको सेवा हिमालयन बैंकले दिइरहेको छ। हिमालयन र इन्भेस्टमेन्ट बैंकले आफ्नै कार्ड नै ल्याएका छन्।
यसरी सबै बैंकले कार्ड रिलिज गर्ने क्रम बढेसँगै पीओएस सिस्टमको प्रयोगमा वृद्धि भएको बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष शाहको भनाइ छ। उनका अनुसार नेपालमा पहिलो चरणमा क्रेडिट कार्ड भित्रिएको थियो। तर त्यो खासै प्रयोगमा आउन सकेन। डेभिट कार्डको सुरुवात भएपछि नेपालीले पनि कार्ड प्रयोग गर्न थाले। पहिला कार्ड भन्ने कुरा विदेशीले मात्र प्रयोग गर्छन् भन्ने सोच थियो।
तर अहिले यस्ता कार्ड बैंकमा खाता हुने प्रायः सबैसँग हुने गरेको उनको उनको भनाइ छ। यो डेभिट कार्डको सुरुवातले नै भएको हो। यससँगै नेपालका ठूलाठूला मल, होटल, रेस्टुरेन्ट, एयरलाइन्स, ट्राभल, टे«किङ, मनी एक्सचेन्ज, सुपर मार्केटजस्ता स्थानमा पीएसओ मेसिन प्रयोग भएको छ। अहिले पीओएस मेसिन यति नै छ भन्ने वास्तविक तथ्यांक नभए पनि हजारौंको संख्यामा रहेको अनुमान गर्न सकिने शाह बताउँछन्।
यसको प्रयोगले नेपालमा क्यासलेस कारोबारलाई प्रोत्साहन गरेको बैंकर एसोसिएसनका उपाध्यक्ष ढुंगानाको भनाइ छ। भाटभटेनीमा प्रयोग भएको पीओएस मेसिनमा कार्ड प्रयोग गर्ने मानिसको संख्याले नेपालीले पनि क्यासलेस कारोबारमा विश्वास गर्न लागेको अनुभव हुने उनी बताउँछन्। उनका अनुसार यो सुरक्षाका हिसाबले पनि राम्रो हो। पर्यटकले पनि यस्ता कार्ड सुरक्षाका हिसाबले नै प्रयोग गरेका हुन्।
के हो पीओएस कार्ड मेसिन ?
पीओएस मेसिन क्यासलेस कारोबार गर्ने माध्यम हो। यसका माध्यमबाट ग्राहकले आफ्नो डेबिट वा क्रेडिट कार्डमार्फत रकम भुक्तानी गरी सामान तथा सेवा खरिद गर्न सक्छन्। दैनिक उपभोग्य सामान किन्ने पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर, ठूलाठूला सपिङ मल, होटल, हवाई टिकट सिनेमा हललगायत पैसाको कारोबार गरिने जुनसुकै स्थानमा यो मेसिन प्रयोग गर्न सकिन्छ।
एटीएम वा बैंकमै गएर नगद निकाल्नुपर्ने झन्झटलाई यो सिस्टमले निर्मूल पार्नेछ। यसले पैसा हराउने, लुटिनेलगायत समस्याबाट पनि बचाउँछ। यस किसिमको कारोबार बढ्दै गयो भने राष्ट्र बैंकलाई नोट छापिरहनुपर्दैन। नोट छाप्दा बिदेसिने मोटो रकमको बचत हुनुका साथै डिजिटल फाइनान्स पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
शनिवार, फागुन १२, २०७४ इन्टरनेटमा फड्को
शुक्रवार, फागुन ११, २०७४ सुन्दरीको एउटा ट्वीटले डुबायो एक खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ !
मंगलवार, माघ २३, २०७४ एनटीसीले प्रिपेड ग्राहकलाई सापटी दिने
१७ न्यायाधीश छानबिनमा 2519
एक्सनमा लालबाबुः तारे होटल, सिमेन्ट उद्योग र अस्पतालमाथि कारवाही 3118
मिर्गौला पीडित गायिका जलजलालाई कोरियाबाट सहयोग 157